Himalaya Dainik » प्रकाशको पूण्यतिथिमा ‘बिनाले सिर्जनालाई नबोलाई किन अाएको भन्दै’ गरिन् अपमान !
४ मंसिर २०७५ |
प्रकाशको पूण्यतिथिमा ‘बिनाले सिर्जनालाई नबोलाई किन अाएको भन्दै’ गरिन् अपमान !
नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड निवासमा सोमवार छोरा प्रकाश दाहालको प्रथम पुन्य तिथीमा बुहारी सिर्जनामाथि खानेपानी मन्त्रीसमेत रहेकी प्रचण्डकी अर्की बुहारी बिना मगरले सिर्जनालाई अपमान गरेको आरोप लागेको छ ।
प्रकाशको प्रथम स्मृतिमा प्रकाशन गरिएको स्मृतिग्रन्थमा पनि प्रकाश दाहालकी पत्नी भनेर बिना मगरको मात्र नाम राखिएको छ । संक्षिप्त परिचयमा सिर्जनाका छोरा प्रसिद्धको नाम राखिएको छ । तर पत्नीमा आफ्नो नाम नराखेर अस्तित्व स्वीकार नगरिएको तथा पूण्यतिथिमा अपमानजनक व्यवहार भएको भन्दै सिर्जनाले ‘सम्बन्धित ठाउँमा’ आपत्ति जनाएकी छन् ।
सोमबारको कार्यक्रम हुँदा मञ्चको दोस्रो लहरमा मोहन वैद्यसँगै प्रचण्डका छोरी रेणु, गंगा र बुहारी बिना बसेका थिए । त्यसबीचमा नेकपाका केही नेताहरुले कार्यक्रमस्थलको कुनामा बसेर हेरिरहेकी अर्की बुहारी सिर्जनालाई पनि मञ्चमा लगेका थिए ।
सिर्जना गएर मञ्चको तेस्रो लहरमा बस्नासाथ अघिल्लो लहरमा बसेकी बिना पछाडि फर्केर केही भनेको दृष्य भिडियोमा कैद छ । बिनाले पछाडि फर्केर सिर्जनालाई केही भनेलगत्तै रेणु गंगा र बिना मञ्चबाट केहीबेर बाहिरिए । उनीहरु उठेपछि सिर्जना पनि उठेर पत्रकार दीर्घाको कुर्सीमा गएर बसेकी थिइन् ।
स्रोतका अनुसार सिर्जनालाई सोमबारको कार्यक्रममा बोलाइएको थिएन । उनी मञ्चमा गएर बसेपछि बिनाले ‘तपाई किन आउनु भएको यहाँ ?’ भन्दै अपमानजनक व्यवहार गरेको प्रत्यक्षदर्शी एक सुरक्षाकर्मीले बताए । त्यसपछि सिर्जना कार्यक्रमस्थलभर एउटा कुनामा गएर बसेकी थिइन् ।
सोमबारको घटनाबारे सिर्जनासँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनले आफू अहिले थप केही नबोल्ने बताइन् । उनले छोरा स्वीकार गर्ने तर आफूलाई स्वीकार नगर्ने कुरा सैह्य नहुने भने बताएकी छन् ।स्मारिकामा आफ्नो नाम प्रकाशकी पत्नीको रुपमा नराखिएकोमा दुःख लागेको बताइन् ।
स्मारिकामा बिना मगरले प्रकाशको बैबाहिक जीवनका सन्दर्भमा सिर्जना र उनीभन्दा पहिलेकी प्रथम पत्नीलाई चोट पर्ने कुराहरु लेखेको भन्दै आलोचना भएको छ ।
प्रकाशित मिति ४ मंसिर २०७५, मंगलवार ११:४६